LUNGISA IVOLUMU EBHUTHINI ENGENAKULINGANISWA WINDOWS 10 BLUE SCREEN STOP: 0X000000ED - I-WINDOWS 10
Lungisa ivolumu ebhuthini engenakulinganiswa windows 10 Blue Screen STOP: 0x000000ED
Ukuthola UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME I-BSOD Ngemuva kokufaka Windows 10 ukubuyekezwa kuka-Okthoba 2018? Noma ulwa nephutha 'elingenakulinganiswa leBoot Volume', ekuvimbela ukuthi ungene ngemvume ku-Windows 10? Leli phutha Windows 10 ivolumu ye-boot engenakulinganiswa Iphutha le-BSOD STOP: 0x000000ED kwenzeka kakhulu uma iWindows ingakwazi ukufinyelela ivolumu equkethe amafayela we-boot. Okwenzeka lapho kunenkinga ku-hard drive yesistimu noma ukwahlukanisa lapho kufakwa khona iWindows. Ithiphu yepro: (Kunezizathu eziningi kakhulu zenkohlakalo yakho ye-Hard disk neningi le- ukufakwa kwesoftware engafuneki, amagciwane, okubhalwe ngaphezulu kwedatha.).
Okuqukethwe umbukiso 1 Yini ebangela ivolumu ebhuthini engenakulinganiswa windows 10 ezimbili Lungisa ivolumu ebhuthini engenakulinganiswa 2.1 Ukulungisa okuzenzakalelayo 2.2 Yakha kabusha i-Master Boot Record (MBR) 2.3 Hlola Amaphutha eDrayivu yeDiski 2.4 Amawindi amawindi abe yimodi ephephile
Lokho kwenzeka kakhulu ngemuva kokuthuthuka kwamawindows 10, Njengoba inani labasebenzisi libika le nkinga Isithangami seMicrosoft njengo:
Lapho ngivula i-PC yami, i-Windows 10 logo screen yavela njengoba yayijwayele ukwenza, kepha indilinga yamachashazi yahlala isikhathi eside, kwabe sekuvela isikrini esiluhlaza sithi “I-PC yakho yahlangabezana nenkinga, futhi idinga ukuqala kabusha ”. Ngaphansi kwalesi sikrini, ikhodi yokumisa yayithe ' IVOLUME LEBHOYOTI ELINGENAKULWA '.
Yini ebangela ivolumu ebhuthini engenakulinganiswa windows 10
Kunesizathu ezahlukahlukene esidala iphutha UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Kungenxa yehadiwe elingalungile noma izilungiselelo zehadiwe ezingaqondakali kahle. Kungenzeka futhi uma amafayela ahlobene ne-boot onakalisiwe. uhlelo lwefayela olonakele oluhlulekile ukukhweza noma izilungiselelo eziyisisekelo zokufaka / zokukhipha (i-BIOS) zilungiselelwe ukuphoqa izindlela ze-UDMA ezisheshayo.
Kungenzeka futhi uma kunenkinga ku-hard drive yesistimu noma ukwahlukanisa lapho kufakwa khona iWindows yakho. Noma isoftware yomuntu wesithathu nezinsizakalo nokuningi. Noma ngabe yisiphi isizathu lapha ezinye izixazululo ongazisebenzisa ukulungisa ivolumu ye-boot engenakulinganiswa kumawindi 10.
Lungisa ivolumu ebhuthini engenakulinganiswa
Okokuqala susa wonke amadivayisi angaphandle, afaka iphrinta, isithwebuli, i-HDD yangaphandle njll bese uqala kabusha amawindi. Lokhu kuzolungisa inkinga uma kukhona ukungqubuzana kwehardware nesoftware okubangela inkinga.
Uma uthola lo mlayezo wephutha UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME njalo nangemva kwemizamo eminingi yokuqalisa kabusha i-PC yakho. Futhi awukwazi ukufinyelela esikrinini sakho sokukhiya ukuze ukwazi ukungena ngemvume futhi uqhubeke nokuxazulula inkinga nge-PC yakho, Lokho okudinga ukwenze dala imidiya yokufaka futhi wenze ezinye izinyathelo zokuxazulula inkinga ezithuthukile ukulungisa inkinga.
iphrinta ye-canon inephutha lesimo windows windows 10
Uma usukulungele ukufakwa kwemidiya, Yifake bese uqala uhlelo lwakho kusuka kwimidiya yokufaka.
Yeqa isikrini sokuqala nakwisikrini esilandelayo, khetha Lungisa ikhompyutha yakho inketho etholakala ekhoneni elingezansi kwesokunxele
Khetha Xazulula inkinga , lapho-ke Izinketho ezithuthukisiwe .
Khetha Ukulungisa okuzenzakalelayo , bese ukhetha i-OS eqondisiwe, I-Windows 10
amafasitela 10 awakwazi ukukhanyisa isibani sasebusuku
Ukusuka lapha iWindows izosebenzisa ukulungiswa okuzenzakalelayo okuzonakekela inkinga yakho. Ngalesi sigaba sokuxilonga, Ukulungiswa Kokuqalisa kuzoskena isistimu yakho futhi kuhlaziye izilungiselelo ezahlukahlukene, izinketho zokumisa, namafayela wohlelo njengoba kubukeka njengamafayela akhohlakele noma amasethingi wokucushwa okushintshiwe. Uma usuqedile, qala kabusha isistimu yakho bese uhlola ngalesi sikhathi amawindi aqale ngokujwayelekile.
Yakha kabusha i-Master Boot Record (MBR)
Uma ukulungiswa kokuqalisa kwehlulekile ukulungisa inkinga, ake sakhe kabusha i-Master Boot Record (MBR) Equkethe imininingwane yokuthi iWindows ihlala kuphi kwi-hard drive yakho futhi iyisiza ukuthi ilayishe kahle uma uvula ikhompyutha yakho. Uma lokhu konakale, kungaholela ephutheni levolumu elinganqobeki.
Ukuze wenze lokhu futhi Finyelela inketho Ethuthukile kusuka ekulungiseni ikhompyutha yakho> Troubleshoot. Lesi sikhathi khetha i-Command Prompt bese wenza umyalo “ bootrec / fixmbr “Lokho kulungisa izinkinga ze-Master boot record.
Ngokungeziwe yenza bootrec / fixboot futhi bootrec / yakha kabushabcd ukulungisa izinkinga zemenenja yeBoot bese Wakha kabusha irekhodi leBoot.
Hlola Amaphutha eDrayivu yeDiski
Ngemuva kokulungisa izinkinga ze-Master Boot Record, ake sisebenzise umyalo we-chkdsk ngamapharamitha angeziwe ukuphoqa isheke lediski nokulungisa amaphutha wedrayivu yediski. Kumyalo ofanayo we-command prompt type chkdsk / f / r
Lapha / F Ilungisa amaphutha kudiski naku / R Ithola imikhakha emibi futhi ibuyise imininingwane efundekayo Ngaphezu kwalokho ungangeza / X lokho kuphoqa ivolumu ukuthi yehle kuqala uma kunesidingo.
Ngemuva kokuqedela, inqubo yokuskena, qala kabusha amawindi bese uhlola lolu hlelo lwesikhathi luqale ngokujwayelekile. Alikho iphutha elingeke lalinganiseki leBoot Volume.
Amawindi amawindi abe yimodi ephephile
Noma kunjalo, udinga usizo? ake qalisa kumodi ephephile ukwenza ezinye izinyathelo zokuxazulula inkinga. Imodi ephephile isici esakhelwe ngaphakathi sokuxazulula inkinga esikhubaza abashayeli nezinhlelo ezingadingekile ngesikhathi senqubo yokuqalisa. I-Windows Safe Mode ilayisha isistimu yokusebenza ngesethi encane yamafayela wesistimu kanye nezishayeli zedivayisi - okwanele nje ukuqala iWindows OS. Kwimodi ephephile, izinhlelo zokuqalisa, izengezo, njll, azisebenzi. Okwindows 7 qala kabusha amawindi bese ucindezela ukhiye we-F8 ekuqaleni bese ukhetha i-boot mode ephephile. Funda ukuthi ungaqalisa kanjani iWindows 10 no-8.1 ungene kwimodi ephephile.
Uma ukumodi ephephile qala ukhiphe izinhlelo zokusebenza ezisanda kufakwa ezingadala ukungqubuzana okuholela ku-Iphutha le-Boot Volume engenakulinganiswa.
Mane ucindezele iWindows + R, thayipha netapp.wiz bese kulungile qhafaza kwesokudla kuhlelo lokusebenza olusanda kufakwa bese uzikhipha.
Amafayili wesistimu alahlekile futhi, kwesinye isikhathi abangela iphutha elihlukile lesikrini esiluhlaza okwesibhakabhaka, kufaka phakathi Iphutha leBoot Volume elingakhuleki Sincoma ukuthi sisebenze Isihloli sefayela lesistimu insiza eskena futhi ibuyise amafayela angekho kufolda ecindezelweyo etholakala % WinDir% System32 dllcache .
Windows 10 Kungezwe isici sokuqalisa esisheshayo ukunciphisa isikhathi sokuqalisa, bese uqala amawindi ngokushesha okukhulu. Kepha lesi sici sinokunye ukungalungi okungadala leli phutha le-Blue Screen. Sincoma ukuthi Khubaza ukuqala okusheshayo bese ubheka inkinga ixazululwe wena noma cha.
windows 10 qala imenyu ne-cortana engasebenzi iphutha elibucayi
Futhi kwesinye isikhathi i-junk, i-cache, iphutha lesistimu, i-Temp, amafayili we-junk noma okufakiwe kokubhalisa okuphukile kubangela izinkinga ezahlukahlukene zokuqalisa kukhompyutha yewindows. Sincoma ukusebenzisa i-optimizer system yamahhala Ukuhlanza Ukuhlanza lawa mafayela angenasidingo. Futhi lungisa okufakiwe okuphukile kokubhalisa okuphukile.
Uma kungekho esinye sezixazululo ezingenhla esihlulekile ukulungisa iphutha le-windows 10 eliluhlaza okwesibhakabhaka, sekuyisikhathi sokusebenzisa i- uhlelo lokubuyisela isici ebuyisela emuva izilungiselelo zamanje zesimo esimeni esedlule sokusebenza.
Ngabe lezi zixazululo zisize ukulungisa i- Iphutha levolumu ye-Boot engenakulinganiswa ku-Windows 10? Sazise ukuthi iyiphi inketho ekusebenzele, Sisadinga noma yiluphi usizo ukhululeke ukuxoxa ngamazwana angezansi. Futhi, funda
I-iTunes ayisebenzi ku-Windows 10? Lapha 5 Izinkinga ezahlukene iTunes kanye nezixazululo
Yini amafomethi wefayela le-HEIC ne-HEIF nokuthi ungaguqula kanjani i-HEIC ibe yi-jpg
11 izilungiselelo eziyisisekelo okufanele uzinike amandla ukuze uvikeleke Windows 10 I-Laptop / PC
ukusebenza akukwazanga ukuqedwa
windows 10 buyekeza awukho umsindo
amawindi awakwazi ukuqinisekisa isiginesha yedijithali yamashayeli adingekayo kule divayisi
imenyu yokuqala iphutha enzima ayisebenzi windows 10
engeza umsebenzisi windows 10 ngaphandle kwe-imeyili